Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » IMEX America: Ọ dị mma ịlaghachi!
IMEX America 2021 na-emechi ogbako ndị nta akụkọ
Mgbe a ọrụ n'aka izu kọwara site ihe karịrị mmetụta nke "ọ dị mma na-azụ,"IMEX onyeisi oche Ray Bloom na CEO Carina Bauer e sonyeere na podium nke IMEX America mmechi pịa ogbako Steve Hill, CEO na President nke LVCVA; Paul VanDeventer, Onye isi ala na onye isi oche nke MPI; na Stephanie Glanzer, onye isi ndị na-ere ahịa na onye isi oche na MGM Resorts International.
Ihe karịrị ndị na-azụ ahịa 3,300 nọ na IMEX America n'izu a yana ọtụtụ n'ime ha kwadoro ndị na-azụ ahịa.
Ihe omume na Mandalay Bay dị na Las Vegas hụrụ ụlọ ọrụ ngosi ihe karịrị 2,200 na-anọchite anya mba 200.
E nwere ihe dị ka nhọpụta 50,000 emere na nzaghachi na-egosi ihe omume ahụ mepụtara azụmahịa siri ike maka ndị ngosi.
Ray akara 10th mbipụta IMEX America na nchịkọta akụkọ ọdịnala ya nke ndekọ azụmaahịa sitere n'izu: “Ihe karịrị ndị na-azụ ahịa 3,300 nọ ebe a n'izu a, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha nabatara ndị na-azụ ahịa. Anyị nwekwara ihe karịrị ụlọ ọrụ ngosi 2,200 na-anọchite anya mba 200-gbakwunyere. Oge nhọpụta dị gburugburu 50,000 na nzaghachi na-egosi na ha mepụtara azụmahịa siri ike maka ndị ngosi. Ihe a ma ama bụ ịdị mma azụmahịa na RFP na-abịa site na nhọpụta nke ndị na-azụ ahịa bịara. "
Carina gbasaa n'elu Achọ ahịa egosiri n'ime izu. “Ọ bụụrụ anyị ihe na-enye obi ụtọ na ihe ọṅụ ịnụ ọtụtụ akụkọ na-alọghachi azụ. London & Partners, enyi anyị ebe a taa, na LVCVA, na ọtụtụ ndị ọzọ, gụnyere hotel dị iche iche dị ka Mandarin Oriental, niile kọrọ ike azụmahịa pipelines ziri ezi site Q3 n'afọ ọzọ na n'ime 2025. Nke a IMEX izu nyere anyị niile ihe mere kwere na ọdịnihu ụlọ ọrụ na-egbuke egbuke. "
Ọnọdụ dị n'ime ụlọ ahụ dị mma ka onye ọ bụla so na panel ahụ na-ekerịta akụkọ ihe ịga nke ọma ma kwụọ ụgwọ maka nkwụsi ike na mgbanwe nke ụlọ ọrụ azụmahịa azụmahịa zuru ụwa ọnụ, dị ka e gosipụtara na IMEX America site n'ogo na oke ihe ngosi nke afọ a mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ abụọ. afọ nke mmechi ụlọ ọrụ.
Ihe ọhụrụ na ntinye
Dị ka oge niile, IMEX America na-enye ọtụtụ atụmatụ na ohere na mgbakwunye na azụmahịa ihu na ihu. N'izu a, ha gụnyere ihe karịrị ọmụmụ akwụkwọ 200, egwu agụmakwụkwọ ọhụrụ, ndị mmadụ & Planet Village ọhụrụ nwere mmanya mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri "adịghị mma" yana nnọkọ nkwado, Mpaghara Tech Therapy Area, na mmemme ahụike kwa ụbọchị nke gosipụtara ọdịnala #IMEXrun na Ụtụtụ Wednesday.
Ndị ọkachamara na klaasị ụwa na ndị na-ekwu okwu, agụmakwụkwọ ọkachamara maka ụlọ ọrụ, yana mkpakọrịta na ndị isi ụlọ ọrụ, yana nkuzi na mmemme maka ụmụ akwụkwọ na ngalaba, wepụrụ izu izukọ na-arụsi ọrụ ike.
Carina chịkọtara: “Dịka ọtụtụ n'ime unu, ndị otu anyị rụsiri ọrụ ike ruo ogologo oge iji mee ka IMEX America 2021 pụta. Anyị nwere obi ụtọ ịmara na ị na-ekiri, na-eche ma na-akwado ya na ndụ n'ihi na ọ pụtara nke ukwuu maka ụlọ ọrụ ụwa anyị. Anyị agaraghị eme ya ma ọ bụghị gị. Nke kachasị mkpa, anyị na-emere gị ya n'ihi na anyị kwenyere n'ụzọ siri ike na uru akụ na ụba na mmetụta dị mma nke ụlọ ọrụ a n'ụwa nile. Izu a egosila na - mkpokọta - anyị alọghachila, na anyị laghachitela azụmaahịa. Ọbụlagodi na ị nọghị n'ime ụlọ ahụ, anyị maara na ị na-eche ya site n'ebe dị anya.
Emebere ụbọchị IMEX America 2022 dị ka Ọktọba 11 – 13, yana Smart Monday, nke MPI kwadoro na Ọktọba 10.